wararka maanta-arlaadii.net » Wasaarada Gaashan dhiga oo Caawa Weerar lagu qaaday
Wararka naga soo gaaraya Degmada Dayniile ee Magaalada Muqdisho, ayaa sheegaya in Kooxo Hubeysan ay goordhow weerar ku qaadeen Xarunta Wasaaradda Gaashaandhiga oo ah meel amnigeeda aad loo ilaaliyo.
Kooxo Hubeysan ayaa bambaanooyin ku tuuray Kontoroolka laga galo irida koowaad ee Wasaaradda Gaashaandhiga, Waxaana xigtay rasaas xoogan oo laga maqlay goobta.
Goobjoogayaal ayaa soo sheegaya in dhowr bam lagu tuuray marka la dhaafo halka loo Yaqaano Ceel Tusbaxle, waxaana ku yaala goob baaritaan oo lagu hubiyo gaadiid iyo dadka galaya Dhismaha Xarunta Wasaaradda Difaaca Somaliya.
Saraakiil ka tirsan laamaha amniga ayaa qiray in qaraxyada kadib ay xigeen rasaas ay isweydaarsadeen ciidankii ku sugnaa goobta iyo dableydii weerarka soo qaaday. Warar soo baxaya ayaa sheegaya inuu jiro khasaare kala duwan oo ka dhashay weerarka walow, aan xaqiiqdiisa laheyn.
Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Degmada Dayniile ayaa dhankooda sheegay in bambaanooyinka ay jiraan, balse rasaasta la maqlay ay yihiin oo keliya kuwo ay ridayeen ciidankii ku sugnaa goobta la weeraray.
Xarunta la weeraray ee Wasaaradda Gaashaandhiga waxay horey saldhig ugu eheyd Madaxweynaha Dalka Maxamed C/llaahi Maxamed Farmaajo, inkastoo uu isaga soo guuray markii la xaliyay khilaafkii ka dhashay mooshinkii ka dhanka ahaa Gudoomiyihii hore ee Golaha Shacabka, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Xildhibanada Labada Aqal oo Ka soo Hor jeestay heshiska Galmudug iyo Ahlu Suna